Coronavirus Fearjọ Na-akpata Isi Global Omume Shutdowns
Location: Mbido » Ịdee » Safety » Coronavirus Fearjọ Na-akpata Isi Global Omume Shutdowns
Coronavirus na-atụ egwu na-akpata mmechi zuru ụwa ọnụ
Coronavirus na-aga n'ihu na-enwe mmetụta na nzukọ na ụlọ ọrụ ihe omume, na-eme ka ndị na-eme ihe ngosi wepụ isi ihe omume nkà na ụzụ; ebe mmechi na Wuhan, China; na ịkpaghasị njem. Ọ bụ coronavirus na-atụ egwu nke kasị sie ike.
Taa, Wenezdee, Febụwarị 12, 2020, GSMA, nke na-ahazi Mobile World Congress (MWC), bụ onye a manyere ikweta na ọ ga-agbanye ihe omume nke afọ a mgbe ihe karịrị ụlọ ọrụ 40 wepụtara na-ekwu maka nsogbu ahụike na nchekwa.
MWC, nke akpọrọ “ihe ngosipụta kasịnụ n’ụwa maka ụlọ ọrụ mkpanaka” nke na-adọta ihe ruru 100,000 ọbịa sitere n’ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mba 200, yiri ka mgbasa nje a ga-emetụta oke.
Companlọ ọrụ ndị kwuputara ọpụpụ ha n'ihi ụjọ coronavirus a gụnyere Amazon, Ericsson, Facebook, Sony, Intel, Cisco na LG, BT, Nokia, Ericsson, US chipmaker Intel, Cisco, Vodafone, na Germany Deutsche Telekom.
E mere atụmatụ na ụlọ ọrụ China bụ otu n'ime ndị ngosipụta kasịnụ nke ihe omume ahụ wee kpọga ndị ọrụ na Spain ka ha kpọpụ onwe ha iche tupu oge eruo, The Guardian kwuru
GSMA amachibidoro ndị njem si Hubei, ógbè dị n'etiti etiti nje ahụ. Ihe dị ka 5,000-6,000 (5-6%) nke ndị bịaranụ kwa afọ si China bịa.
N'abalị a, na ederede GSMA edere na MWC Barcelona 2020, John Hoffman, CEO nke GSMA Limited kwuru, sị:
"N'ihe banyere nchekwa na ahụike dị mma na Barcelona na mba ndị ọbịa taa, GSMA akagbuola MWC Barcelona 2020 n'ihi na nchegbu zuru ụwa ọnụ gbasara ntiwapụ coronavirus, nchegbu njem, na ọnọdụ ndị ọzọ, eme ka GSMA ghara inwe ike ijide ihe omume.
“Ndị nnọkọ oriri na ọ cityụ cityụ obodo ahụ na-asọpụrụ ma ghọta mkpebi a. GSMA na ndị mmekọ obodo ahụ ga-anọgide na-arụ ọrụ n'otu ma na-akwado ibe ha maka MWC Barcelona 2021 na mbipụta n'ọdịnihu.
GSMA na-anọchite anya ọdịmma nke ndị na-ahụ maka ekwentị gburugburu ụwa, na-ejikọ ihe karịrị ndị ọrụ 750 na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụlọ ọrụ 400 na gburugburu ebe obibi dị mkpirikpi gụnyere ekwentị na ndị na-arụ ọrụ ngwaọrụ, ụlọ ọrụ ngwanrọ, ndị na-eweta akụrụngwa, na ụlọ ọrụ Internetntanetị, yana ụlọ ọrụ ndị dị n'akụkụ ụlọ ọrụ dị nso. GSMA na-ewepụtakwa ihe omume MWC nke ụlọ ọrụ na-eduzi kwa afọ na Barcelona, ​​Shanghai, na Los Angeles, yana Mobile 360 ​​Series nke nzukọ mpaghara.
Nkagbu zuru ezu ga-anọchitekwa nnukwu nsogbu na Barcelona na ụlọ ọrụ ile ọbịa nke obodo. A na-eme atụmatụ igosi ngosipụta ahụ ihe ruru € 500m (US $ 543m) n'obodo ahụ ma na-enye ndị ọrụ mpaghara ọrụ oge oge 14,000, ka ndị mgbasa ozi Spanish na-akọ.
Barcelona Internet Spain
Bahamas Tourism na-agba mbido ụgbọ elu United Airlines na-akwụsịghị na Denver ruo Nassau
Etihad Airways weputara TravelPass
Osteoarthritis nke ikpere: ọgwụgwọ ọhụrụ maka mgbu ...
Hawaii jupụtara na ndị njem nlegharị anya, ewezuga ndị Japan
Barbados, Hawaii, Palau: “Otu esi enweta agwaetiti anyị…